Ungakhetha kanjani kusuka kumaphakheji we-search engine?
Namuhla, kunezinsiza eziningi zokuhlinzeka nge-search engine ukuvela emhlabeni jikelele. Abanye babo bakhanga abanikazi bewebhu ngezintengo ezingabizi, kuyilapho abanye behlinzeka amaphakheji wokwenza izinto ezibiza kakhulu kodwa nekhwalithi. Ngakho, kuba yinto ekhohlisayo ukuthola inkampani enhle ye-SEO phakathi kwamakhulu ezinkulungwane ezihlukahlukene, ikakhulu uma ungakaze usebenzise amasevisi wokuthuthukisa ngaphambi - cheap fake ids that scan. Njengamaphakheji we-SEO angase ahluke kakhulu komunye nomunye, udinga ukuthatha isikhathi ukufaka izinsizakalo zokuthuthukisa izinhlelo ze-ejensi ezihlukahlukene.
Ukusebenzisa injini yokusesha kuye kwaba yingxenye ebalulekile ekuthuthukiseni ibhizinisi online. Kungakhathaliseki ukuthi ungathanda ukwakha iwebhusayithi yenkampani yendawo noma umthombo omkhulu webhizinisi, udinga amasevisi we-SEO njengoba yenza ibhizinisi lakho le-intanethi libonakale ku-SERP futhi ludonse amakhasimende akho angenzeka. Umkhankaso wokwenza injini yokusesha injini unomthelela oqondile ekubuyiseni kwakho ekutshaleni. Noma kunjalo, ukwakha isu eliphumelelayo le-SEO, kudingeka ukhethe iphakethe le-SEO elifanele. Le phakheji akufanele ikusize kuphela ukuheha ithrekhi ehlosiwe kusayithi lakho kodwa futhi ihlangabezane nezidingo ezithile zebhizinisi lakho. Iqiniso liyatshelwa, akuyona into elula ukukhetha iphakheji elifanele le-SEO. Noma kunjalo, kunezinto eziningi ongayenza ukuqinisekisa ukuthi ugcina nephakheji elihle lokusesha injini yakho kubhizinisi lakho le-intanethi.
Izinhlobo ezahlukene ze-SEO amaphakheji
Amaphakheji anikezwe ama-ejensi we-SEO angahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili ezisisekelo - ezijwayelekile nezenziwe ngezifiso.
Iphakheji ejwayelekile ye-SEO ngokuvamile ihlanganisa amasevisi ayisisekelo nama-SEO okuyisisekelo efana nokucwaninga ngegama elingukhiye, ukubhala okuqukethwe, ukuhlelwa kwesakhiwo sangaphakathi nesayithi nokwakha isixhumanisi. Kusho ukuthi le phakheji ihlanganisa kuphela amasu okuthuthukisa amawebhusayithi angathuthukisa ukutholakala kwebhizinisi lakho ku-intanethi. Iphakheji ejwayelekile ye-SEO ngokuvamile inenani elingabizi ngoba alidingi noma yimiphi imithombo yokwenza okungeziwe futhi ingenziwa nguchwepheshe oyedwa we-SEO. Amaphakheji we-SEO ajwayelekile ayathandeka kumawebhusayithi asanda kumiswa. Indaba yokuqala abanikazi bewebhu ababhekana nayo yokuhleleka iphakheji ejwayelekile ye-SEO akuzona zonke izindlela zokuhlinzekwa ezinikezwayo ezidingekayo kumkhankaso wabo wokuphromotha. Ngaphezu kwalokho, ayikho ithuba lokufaka le nsizakalo esikhundleni salolu hlelo ngezidingo ezidingekayo noma ungazikhokheli nhlobo. Njengoba kungenangqondo ukukhokha okungenalutho kumasevisi wakho wewebhu, abathengisi abaningi be-intanethi babheke iphakheji le-SEO elenziwe ngokwezifiso.
Iphakethe le-SEO elenziwe ngezifiso linikeza abanikazi bewebhu ngamasevisi akhelwe ngokukhethekile amabhizinisi abo. Azikho izinsizakalo ezingenalusizo ozidingayo ukukhokha. Naphezu kokuthi izindleko zezinsizakalo ezenziwe ngezifiso ziphakeme kakhulu kunezinsizakalo ezijwayelekile, kusengumqondo ohlakaniphile wokutshala imali kuyo. Njengoba lolu hlobo lwephakethe lwe-SEO luhambisana nezidingo ezihlukile zebhizinisi lakho, izimali zakho zizokhokhwa ngezikhawu. Izinsizakalo zokwenza injini yokusesha ngokwezifiso ngokuvamile zibandakanya ukuhlaziywa kwe-niche yemakethe, ucwaningo lokuncintisana namanye amacebo okuthuthukisa okuzuzisa angathuthukisa ukutholakala kwebhizinisi lakho ku-intanethi nokuphakamisa ukuguqulwa kwewebsite. Izinsizakalo zokwenza injini yokusesha ezihlelwe ngokwezifiso zidinga umsebenzi weqembu lobuchwepheshe yingakho izindleko zabo zingaba ngaphezulu kunezilinganiso.
Ngakho, lapho unquma ukuthi iyiphi iphakheji ye-SEO okufanele uyisebenzise, ​​kudingeka uqiniseke ukuthi uthola wonke amasu wokusebenzisa ibhizinisi lakho le-inthanethi elidinga ukulidlula. Qinisekisa ukuthi iphakethe le-SEO oyikhethayo liqukethe ukuhlaziywa kwakho kwe-market niche, ucwaningo lwegama elingukhiye, ukukhiqizwa kwekhwalithi yekhwalithi, ukufakwa kwesiqondisi, ukuhlelwa kwe-intanethi ye-intanethi, ukulungiswa kwe-metadata, umkhankaso wokwakha isixhumanisi nokuthunyelwa kwebhulogi.
Yini okudingeka uyibuke kuphakheji le-SEO?
Ukuthenga okuhlelwe kahle okuhambisana nebhizinisi lakho kudinga iphakethe le-SEO kaningi ngendlela ebiza imali futhi ephumelelayo yokusebenzisa iwebhusayithi. Ake sikhulume ngokuningiliziwe ukuthi yini okudingeka uyibuke kuphakethe ye-injini yokucinga ukuze uthole imiphumela emihle ye-SEO.
Isigaba sokuqala semikhankaso yakho yokuthuthukisa kufanele sizinikezwe ekuhloleni kwakho kwe-website, isakhiwo sesayithi. Ukuhlolwa kwezobuchwepheshe kuzosiza ochwepheshe be-SEO ukuthola nokuqeda amaphutha ekhodi ye-HTML. Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa okubanzi kufaka kokubili ukuhlaziywa kwezinto ezingenalutho nakwezinye izindawo ukuqinisekisa ukuthi ayikho amaphutha ezobuchwepheshe ahlukanisa isayithi lakho kusuka ku-Google TOP.
Ukuphakanyiswa kwegama elingukhiye
Isiphakamiso segama elingukhiye siyingxenye esemqoka yephakheji le-SEO njengoba isebenza njengesigaba sokuqala somkhankaso wokuthuthukisa iwebhusayithi. Njengomthetho, ochwepheshe be-search engine optimization banikeza amaklayenti abo ngeqoqo lamagama aphezulu okucinga ukuthi i-SEO i-agency izokhomba. Uchwepheshe we-SEO ochwepheshe kufanele asebenzise inani lamathuluzi ukuhlola ukubaluleka kwamagama angukhiye akhethiwe bese uthola uhlu lemishwana engcono kakhulu yokukhomba ithrekhi yekhwalithi kusayithi lakho.
Umkhankaso wokwakha izixhumanisi wekhwalithi yingxenye ebalulekile kunoma yikuphi ukukhishwa kwamakhasi. Inombolo yezixhumanisi ezifanele nekhwalithi ezikhomba kwisayithi lakho zithatha igunya lakho lesayithi kanye nedumela emehlweni enjini yokusesha. Inkampani enhle ye-SEO kufanele ibambisane nemithombo ehlukahlukene ye-web kanye nezitolo ze-intanethi ukuhlinzeka amakhasimende abo ngenani le-backlink nekhwalithi efanele. Ikhamphani yedijithali ephelele inganikela ngezinsizakalo zokwakha izixhumanisi njengengxenye yephakheji ejwayelekile ye-SEO futhi ikunikeze ngamasu okukhiqiza okulandelayo: ukuhlaziywa kwe-market niche, ukuhlaziywa kwamaphrofayli wokuxhumanisa, ukuhambisa umthombo wakho webhovisi ezifanele kanye negunya lokuqondisa, ibhulogi yezivakashi okuthunyelwe nokudala ikhwalithi nezihloko eziyingqayizivele.
Amasevisi wokumaketha okuqukethwe angabuye afakwe kokubili amaphakheji we-SEO ajwayelekile futhi ahlelekile uma umxhumanisi we-SEO ebheka ukuthi okuqukethwe kwewebhu kuyadingeka kwenziwe ngcono noma kufanele kubhaliswe kabusha. Ukukhiqiza okuqukethwe okulungiselelwe kuyinkqubo yokudla isikhathi futhi inzima ngakho-ke lesi sici sokusebenza singabiza.